Arsenal oo shaacisay Nambarka uu xiran doono Xiddigeeda cusub ee Lucas Torreira | Shabakada Qalinkacayaaraha.com
Arsenal oo shaacisay Nambarka uu xiran doono Xiddigeeda cusub ee Lucas Torreira
(09-07-2018) Kooxda kubadda cagta waddanka Ingiriiska ee Arsenal ayaa waxa tijaabada caafimaadka u maraya laacibka khadka dhexe ee reer Uruguay ee Lucas Torreira, kaddib markii uu dalkiisu ka hadhay Koobka Adduunka.
Torreira ayaa ku sugan magaalada London oo uu kaga biirayo Arsenal isla marka ay soo baxdo natiijada baadhitaanka, waxaana 22 jirkan oo wacdaro ka dhigay Koobka Adduunka uu si toos ah uga mid noqon doonaa xiddigaha uu tababare Unai Emery ku dagaallami doono xili ciyaareedka dhowaanta bilaabmi doona.
Arsenal ayaa heshiis la gashay kooxda Sampdoria ee waddanka Talyaaniga ka hor intii aanu bilaabmin Koobka Adduunku, si ay u xaqiijiso in laacibkan khadka uu ka mid noqdo laacibiinta seeska u noqonaya qorshaha tababaraha cusub ee dhowaanta xilka qabsaday.
Inkasta oo aan weli lagu dhowaaqin inuu ka gudbay tijaabada caafimaadka oo uu si toos ah u saxeexayo heshiiska, haddana waxa markiiba suuqa soo gashay lambarka uu u xidhan doono Gunners, hase yeeshee waxa soo baxaya warar sheegaya in loo diyaariyey lambar iska bannaan oo aanay muddooyinkii dambe cidna xidhnayn.
Sida wararku sheegayaan, Torreira waxa uu u qaadan doonaa Arsenal lambarka 3 oo ay hore u xidhhan jireen xiddighii waaweynaa ee Ashley Cole iyo Nigel Winterburn
Nacho Moreal iyo Saed Kolasinac ayaa wakhtigii ay kooxda yimaaddeen aan la siinin, waxaana Monreal uu xidhaa lambarka 18 halka Saed Kolasinac uu 31 qaato. Sidaas daraadeedna waxa bannaan iska yaalla lambarka 3 oo in muddo ah bannaanaa.